२ अर्ब खर्च हुने एक्स्ट्रिम – इ कार रेसिङ नेपालमा हुदै, कसरी आयो नेपालमा ? –
२ अर्ब खर्च हुने एक्स्ट्रिम – इ कार रेसिङ नेपालमा हुदै, कसरी आयो नेपालमा ?
सन् २०२१ को मे २१ मा मुस्ताङको लार्जुङमा एक्स्ट्रिम -इ कार रेसिङ हुने भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको संयोजन र सहकार्यमा उक्त एक्स्ट्रिम रेस हुने यो इभेन्ट नेपालमा विभिन्न संयोगले आइपुगेको छ।
त्यसपछि हामीले भुटानमा गर्ने सोच बनाएका थियौ तर त्यहाँको भौगोलिक अवस्थाले साथ दिएन। हामीले ठिक मुस्ताङको जस्तो ठाउँ जहाँ हरियाली छैन त्यस्तोमा भुटानमा सडक भेटिएन जहाँ सडक थियो त्यहाँ वातावरण विनास हुने अवस्था थियो। त्यसैले हामीले त्यहाँ गर्न सकन उनले भने।
अगागले यो रेसिङका विश्वभर करोडौं दर्शक भएकाले यसले नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनमा सहयोग गर्ने बताए। आफूले विश्वमा विद्युतीय गाडीको प्रबर्द्धनका लागि नै विद्युतीय कार रेसिङ सुरु गरिएको र यो अफरोड रेस र्‍यालीले नेपालको प्रबर्द्धन हुने उनले बताए। हामी फाइनल र सेमी फाइनल लाइभ गर्ने छौ। विश्वका धेरै स्पोर्टस च्यानलबाट यसको लाइभ हुने छ। त्यसमा कम्तीममा १ करोड ५० लाखले एकैपटक यो इभेन्ट हेर्ने छन्उनले भने।
« सचिन तेन्दुल्कर भर्सेस विनोद दास विच कीर्तिपुरमा क्रिकेट म्याच हुदै
लिपुलेकका विषयमा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले गरेको सहमतिका बारेमा नेपाल बोल्नु पर्छ : वरिष्ठ नेता पौडेल »